Ogige Triglav, Triglavski narodni - Bled
Mpaghara: 880 km ²;
Ekwentị: +386 4 578 02 00;
Ụbọchị ntọala: 1961.
Triglav bụ nanị ogige ntụrụndụ dị na Slovenia , tinyere ugwu nke otu aha, gburugburu ya na ala Mezhakl. Kwa afọ, ebe a na-abịa ihe ruru nde mmadụ abụọ na-eme njem nleta iji nwee mmasị na ugwu ukwu, ndagwurugwu, osimiri na ọdọ mmiri .
Ezumike kachasị mma na ọdịdị
A na-ewere Triglav (Slovenia) otu ogige ntụrụndụ kasị ochie na Europe, n'ihi na e welitere ajụjụ nchedo ya n'afọ 1924. Ọ bụ mgbe ahụ ka e kere Alps Protection Park, bụ nke a na-akpọ NTP na 1961. Na mbụ Triglav gụnyere nanị ugwu na ọdọ mmiri asaa. Ka ọ na-erule afọ 1981, e mejupụtara ókèala ya.
Ogige Ntugharị Triglav bụ olulu miri emi na ebe mmiri dị ebube, ndị na-agba chaa chaa ebighi ebi. Uzo abuo n'ime uzo ato n'ugwu a bu ugwu ugwu, ndi otu n'ime ha bu uzo na ozi di. Ebe a na-ewu ewu maka ndị njem nleta na ogige bụ Lake Bohinj, otu ọrụ kachasị amasị na-arịgo ugwu kasị elu na Slovenia - Triglav (2864 m). Ọ kachasị mfe ịga ugwu site na Ukantz.
Ókèala ogige ahụ bụ ụlọ ụmụ anụmanụ ndị na - adịghị ahụkebe, gụnyere agba aja aja, lynxes na kites. Ógbè Triglav bụ 838 km ². Ọ dị na Julian Alps dị n'ebe ugwu-n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba na ókèala na Italy, Austria. Ogige a bi ihe dị ka mmadụ 2,200, e nwere 25 ebe obibi.
N'ime ogige ahụ, enwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe ọ kachasị mfe ịzụta ọnụ ụlọ maka ndị chọrọ ịmatakwu ọdịdị nke Slovenia. Otu n'ime hotels dị n'Ọdọ Mmiri Bohinj , nke na-esote ya bụ mmalite nke ụzọ na-arịgo na Triglav.
Ị nwekwara ike ịrịgo n'ugwu si n'obodo Rudno Pole. Ụzọ a nwere ike imeri n'otu ụbọchị. Ị nwere ike ịkwaga n'ogige ntụrụndụ site na tagzi, ụgbọ ala akwụ ụgwọ ma ọ bụ bọs. Naanị onye ikpeazụ na-ejegharị na ngwụsị izu, site na June 27 ruo August 31.
Bịanụ na Triglav kachasị mma n'oge okpomọkụ iji zọpụta onwe gị pụọ na okpomọkụ dị egwu. Ọnọdụ okpomọkụ ebe a anaghị ada n'elu 20 ° C na ndagwurugwu ahụ, n'ugwu ọ bụ nanị 5-6 Celsius nke okpomọkụ.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere ogige ahụ?
Ijeghari zuru oke site na Triglav gụnyere nnyocha nke ọdọ mmiri kacha mma nke Bohinj, tinyere ọdọ mmiri ndị ọzọ mara mma, dị ka Krnsko. N'ime ogige ahụ, ọtụtụ mmiri mmiri, ndị kachasị mma n'ime ha bụ Savica , Perinichnik .
A na-atụ aro ka ndị njem nleta na-aga ije na ndagwurugwu Blaysky Vintgar , bụ nke na-egbu n'akụkụ osimiri Radovna. Maka mma, na olulu ahụ, a na-eme ndokwa maka ikpo okwu osisi. Tolmina Gorge bụ ụdị ụzọ ámá ndịda na ogige ntụrụndụ.
Triglav - ogige ntụrụndụ nke na-enye ụzọ dịgasị iche iche maka ndị nlekọta ahụmahụ na ndị na-amalite. Dịka ọmụmaatụ, "Nkọwabata ihe gbasara sayensị" na-amalite site na Mojstrana, na-adịru 4-5 awa ma gafee ndagwurugwu kachasị mma. E nwere ụzọ, e mere maka otu awa, na-egosipụta ịma mma na uru nke peat bogs. Onye nke ọzọ na-eduga na alban ala ahịhịa na saịtị ndị mere eme. Ụlọ Ọrụ Ozi nyere ndị nkuzi na nzukọ ọmụmụ ihe aka na anụ osisi nke ogige ahụ.
Na mgbakwunye na ugwu ugwu, otu n'ime ebe ndị mara mma na ogige bụ ókèala Triglav ọdọ mmiri . Mgbe ị rịgoro n'ugwu, ị ga-adị njikere ịnọ n'abalị na ụlọ elu. Enweghị nke a, ị gaghị aga n'elu. Ọ bụrụ na achọrọ, a ga-azụta map zuru ezu nke ogige ahụ n'ụlọ ọrụ ndị nleta. Triglav - ogige nke Slovenia, nke bụ paradaịs maka ndị hụrụ ọdịdị na Alps. Enwere ike ịme ya ọtụtụ awa ruo ọtụtụ ụbọchị, ọ na-adabere na ọchịchọ na ohere nke ndị njem nleta.
Kedu esi enweta ebe?
Iji mee foto mara mma na Slovenia, ị ga-eleta na Triglav. Ị ga-esi na bọs dị na Bled site na bọs. Ụgbọ njem na-elekere 10 nke ụtụtụ, oge njem ahụ bụ minit 30. Ị nwere ike ịbanye n'ọdụ ụgbọ oloko si Ljubljana gaa ọdụ ndị Lesce-Bled, sitekwa n'ebe ahụ site na ụgbọ ala mpaghara gaa ogige.
Ọgba Mmiri nke Vintgar
Ebe obibi ndị mọnk nke Rustovo
Ihe nkiri Museum nke Gotland
Nri anụ na akwụkwọ nri na poteto
Foto maka nwa ọhụrụ site aka aka
David Beckham amabatara ndị sonyere na ogbako ogbako site n'ịza oku ahụ
Bursitis nke nkwonkwo ụkwụ
Anya na-ada site na mbufụt
Pasta na salmon na creamy sauce - Ezi ntụziaka nke spaghetti na uhie uzu na ude
Nchebe nke ụmụaka n'oge okpomọkụ - nlekọta maka nne na nna
Uhie na-acha ọcha na ime ime ụlọ
Na-eche maka nwa amụrụ ọhụrụ
Ogige oche na azụ azụ
Kedu ka esi eji aka gị mee ihe eji akpa ihe?
Obere obere ụlọ - esi arụ ọrụ na-enye ọbụna obere okirikiri?
Ịgba afa aka na ụmụaka
Ụlọ Nzukọ Alaeze nke Seoul
Onye ududo na windo ahụ na-edebe ududo weebụ
Esi ewepu mmiri ara ara?
A na - akpọ ọrụ ahụ nke ga - enyere nwanyị aka inweta nde mbụ ya n'onwe ya ngwa ngwa!
Ọ nwere ike ịkụ cherị na cherị?